Vashandi vePR: Iwe hausi kusunungurwa kubva kuCAN-SPAM | Martech Zone
Vashandi vePR: Hausi kuregererwa kubva kuCAN-SPAM
Chipiri, April 20, 2010 Chipiri, May 10, 2016 Douglas Karr
Iyo CAN-SPAM chiito chave kunze kubva 2003, zvakadaro veruzhinji hukama hukama ramba uchitumira akawanda email zuva nezuva kusimudzira vatengi vavo. Iyo CAN-SPAM chiito chiri pachena zvakajeka, inovhara "chero meseji yemagetsi inotumira chinangwa chekutanga icho chiri kushambadzira kushambadzira kana kusimudzira kwechigadzirwa kana basa."
Vashandi vePR vanogovera zvinoburitswa kumabloggi vanokodzera. Iyo FTC nhungamiro zvakajeka kune vatengesi emaimeri:
Udza vanogamuchira nzira yekusarudza kunze kwekugamuchira ramangwana email kubva kwauri. Meseji yako inofanira kusanganisira tsananguro yakajeka uye inonzwisisika yekuti mugashiri angasarudza sei kuwana email kubva kwauri mune ramangwana. Nyora chiziviso nenzira iri nyore kuti munhuwo zvake azive, averenge, uye anzwisise.
Zuva rega rega ini ndinogamuchira maemail kubva kune vehukama neruzhinji mahunyanzvi uye ivo haana une chero nzira yekubuda. Saka… ini ndichatanga kuvabata kuti vazvidavirire nekuisa faira FTC kunyunyuta neemail yega yega yandinogashira iyo isina nzira yekubuda nayo. Ndingakurudzira mamwe mabloggi kuti aite izvi futi. Tinofanira kubata nyanzvi idzi kuzvidavirira.
Zano rangu kune Vashandi vePR: Tora email mupi webasa uye gadzirisa zvinyorwa zvako uye mameseji kubva ipapo. Ini handina basa nekugamuchira maemail akakodzera, asi ndinoda mukana wekusarudza pane zvisina basa.
Tags: can-spamnamira emailtumira tsambapitchesprpr pitcheshukama hwevanhuspam
Hofisi Yako, Kero Yako, Chako Chako
Hazvina kumbobvira zvakareruka sevateveri uye vateveri
Apr 21, 2010 pa 8: 27 AM
Pane mubvunzo wakasiyana pano, unoti, "sei vanhu vePR vasingagadziri masango akagadzirwa?"
Semunhu wePR mukomana pachangu (ndisina kumbobvira ndasvika kwauri, zvakadaro), ndinonetsekana nepfungwa yekuwandisa email kuputika. Iyo tsika yakanakisa inoenderera kuve yekuziva vateereri vako uye kugadzira mapango anovakwezva, pane kumwaya nekunamata.
Yako posvo inotungamira kumubvunzo wekutevera-asi isu tobva taisa "Ndokumbira undizivise kana usingade kunzwa kubva kwandiri" -eque mutsetse panoperera yega yega-yakataurirwa email.
Apr 21, 2010 pa 11: 35 AM
Mhoro Dave! Pashoma, panofanirwa kuve netambo imomo. Kunyangwe kana kwete email inotaridzirwa zvakasiyana hazvireve kuti haisi SPAM. Iko hakuna 'mashoma' runyorwa saizi yekutengesa-yakavakirwa email. 🙂
Chero bedzi isiri yemunhu uye iri yekusimudzira mune zvakasikwa, ndinotenda PR nyanzvi dzinofanira kutevedzera.
Apr 21, 2010 pa 2: 02 PM
Ndinofunga une pfungwa huru. Iwe unofunga kuti pane imwe nguva nyanzvi dzePR dzinodzidza kuti vanofanirwa kushambadza vatengi vavo zvichibva pahukama hwakasimba panzvimbo pePush media ... Ivo vanofanirwa kuziva kuti haufanire kugumbura blogger ine vateereri 😉
Apr 24, 2010 pa 9: 15 AM
Iko kune here chero rekodhi rekuti mangani Anogona Spam kutyorwa kwakamanikidzwa kusvika parizvino nezvikwereti zvakaunganidzwa?
Apr 27, 2010 pa 2: 01 PM
Kuteerana neCAN-SPAM kunofanirwa kuve nyore bhawa kuti upfuure, asi pane zvimwe zvakasarudzika zvakagadziriswa zveyakajairika PR maitiro kana iwe uchimanikidza kutevedzera kwechokwadi. Kuwedzera chisina kuzvinyoresa chinongedzo uye kero yako yemuviri inofanirwa kukuendesa iwe yakawanda yenzira yekuenda kwaunoda kuve uye munhu wese wePR anoshanda anofanira kunge achiita izvi. Nekudaro, nehunyanzvi pasi peCAN-SPAM, kana mumwe munhu akazvinyora haugone kuvatumira email zvakare, kunze kwekunge vadzokerazve mukati. Unogona kufunga nezvevatengi vakasiyana se "mitsara yakasiyana yebhizimusi" kuita Mutemo semutapi anogona kuuraya nyaya kune mumwe mutengi , asi funga nezve kusunungurwa kwako pane imwe marara. Zvakare, semumiriri (anoshanda semuparidzi) wemushambadzi, iwe unozofanirwa kugovera yako yekusarudzika kubuda nemushambadzi (wako mutengi) kuitira kuti vasatumire kune iyo email kero kunga- zvakare kunetseke muPR maitiro. Iwe unogona zvakare kuita nharo kuti hausi kutengesa chigadzirwa chiri mubvunzo kumunyori wenhau semutengi wekupedzisira, saka nehunyanzvi uri kutumira email ine ruzivo kana yekutengeserana. Uye kana mumwe munhu akaburitsa ruzivo rwekufambidzana nechinangwa chekutambira zvinoburitswa, pane mvumo yekureva Zvinyorwa pano ndezvechokwadi kuti zvese zvine chekuita nekunangisa uye zvakanyanya kukosha kune mutori wenhau. Spam iri muziso remuoni. Kungori kumwe kunakidzwa kweCAN-SPAMPfungwa yezuva!
Apr 27, 2010 pa 2: 10 PM
Todd- Ndinoziva kwave kwave neanopfuura zana ematare eCan-Spam. Iyo FTC inogona kumhan'arira uye zvakare State AG's, uye ISPs senge AOL inogona kumhan'ara pasi peCan-Spam. Saka makambani akaita seMicrosoft akahwina zvakakomba kukuvara kubva kumatsotsi spammers uye ini ndaona iyo FTC ichiwana chero kupi kubva pamadhora makumi mashanu nemashanu kusvika pamadhora gumi emadhora. Facebook yawana mibairo mikuru iri kuuya inosvika madhora makumi masere emadhora. Iyo flipside ndeyekuti yakanyanya mibairo haina kumbobvira yaunganidzwa. Zvakare kuferefeta kwakawanda kunoguma mumisha isina kuburitswa nepepanhau, saka huwandu hwechokwadi hwekumanikidza zviito zvinoita kunge zvisingaverengeke. Ndiri kunyatso bvunza yavo yeruzhinji hofisi yeruzivo nezve izvi uye ndione zvandinogona kuchera. Mufaro!